Vaovao - Fitsaboana Laser Laser miisa Fractional Vs. Famerenana Laser Erbium amin'ny ampahany
Fizarana Laser Laser miverimberina
Ahoana ny fomba fiasan'ireny: Fitaovana famerenan'ny lasantsy karbonika (CO2) mampiasa hazavana infrared entina amin'ny fantsona feno karbôna dioxide hamoronana ratra mikraoba amin'ny sela kendrena. Rehefa tototry ny hoditra ny hazavana dia lasa etona ny tavy ary mitarika ny fanesorana ireo sela hoditra efa antitra sy simba amin'ny sosona ivelany amin'ilay faritra voatsabo. Ny fahasimbana ara-pihetseham-po ateraky ny laser dia mampifanaraka ny collagen efa misy, izay manamafy ny hoditra ary mampitombo ny famokarana collagen vaovao miaraka amin'ny fiakaran'ny fanavaozana ny sela salama.
Ny mahatsara sy maharatsy azy: Na dia tsy misy fandidiana aza, io fomba fitsaboana io dia manintona kokoa noho ny fitsaboana hafa mipetaka amin'ny hoditra, izay mety handika ny vokatra azo tsikaritra kokoa. Raha lazaina izany, ny zava-misy fa manafika bebe kokoa dia midika koa fa ny fampiononana ampahany na feno dia mety ilaina amin'ny fampiononana sy ny fotoana fitsaboana matetika eo anelanelan'ny 60 ka hatramin'ny 90 minitra. Mena sy mafana ny hoditra raha mikasika azy, ary herinandro farafahakeliny fihemorana no andrasana.
Contraindications: Misy contraindications mahazatra maromaro, toy ny areti-mifindra ao amin'ny faritra fitsaboana tadiavina. Ankoatr'izay, ny marary nampiasa isotretinoin tao anatin'ny enim-bolana lasa dia tokony hiandry ny fitsaboana azy. Ny laser laser resurfacing dia tsy soso-kevitra ihany koa ho an'ny karazana hoditra mainty kokoa.
Famerenana Laser Erbium amin'ny ampahany
Fomba fiasany: Erbium, na YAG, laser dia mampiasa hazavana infrared hanaterana angovo mafana any ambanin'ny hoditry ny hoditra. Ny famerenana amin'ny laoniny laser erbium dia miteraka fiparitahan'ny mikrothermal kely (ratra) amin'ny dermis, ny sosona afovoan'ny hoditra, manimba ny collagen sy ny sela hoditra efa antitra ary manosika ny famokarana collagen vaovao sy fanavaozana sela vaovao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ity fomba fanao fitsaboana ity dia manatanteraka karazana vaporisation hozatra voafehy mba hitsaboana sy hanasitranana ny hoditra simba ho fanatsarana ny volon-koditra, ny feony ary ny elitika.
Tombontsoa sy lafy ratsy: Ny fitsaboana laser erbium sombiny dia mifanaraka kokoa amin'ny marary efa antitra, satria, raha oharina amin'ny microneedling, mikendry tavy izay lalina kokoa ambanin'ny tany izy ireo ho fampivoarana bebe kokoa amin'ny famokarana collagen. Na izany aza, tsy misy torolàlana mafy orina hamaritana hoe iza no mety ho tanora loatra noho ireo fitsaboana manokana ireo. Ity fitsaboana ity dia mitaky fihenam-bidy lehibe koa miaraka amin'ny mena izay maharitra maharitra andro maromaro. Ny fitsaboana laser laser erbium dia tsy mety amin'ny tonon-koditra maizina kokoa noho ny risika mety hamoahana azy.
Contraindications: Satria manafana ny hoditra ny laser, dia misy vokany hafa tokony hodinihina, ao anatin'izany ny ahiahy momba ny hyperpigmentation aorian'ny fivontosana, miaraka amin'ny fikarakarana maharitra sy aorian'ny fitsaboana.
Fotoana fandefasana: Oktobra-20-2020